श्वेता लेख्छिन् 'हामी समस्त नेपालीहरु एकढिक्का होऔ', तर किन तेर्स्याईन यतिधेरै प्रश्न ? - www.dthreeonline.com
श्वेता लेख्छिन् ‘हामी समस्त नेपालीहरु एकढिक्का होऔ’, तर किन तेर्स्याईन यतिधेरै प्रश्न ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०८, २०७७ समय: १८:०८:४३
ईटहरी/ कोरोनाको त्रास संगै यतिबेला सिमा बिवाद तातेको छ । नेपाल सरकारले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा राख्दै नया नक्सा सार्बजनिक गरे पछि नेपाली मुलकी भारतिय नायिका मनिषा कोईरालाको एक ट्विटले अहिले तहल्का पिटिरहेको छ । नेपालमा उनको वाहवाही भैरहेको छ भने भारतमा बिरोध । यता उनलाई नेपालका सेलिब्रेटिहरुले समर्थन गरिरहेका छन । सरकारको यो कदमलाई यतिबेला सबैले स्वागत गरिरहेको बेला भारतमा भने यसको चर्को बिरोध भैरहेको छ । यस्तैमा समर्थन गर्दै नायिका श्वेता खड्काले पनि सिमा र नक्साको बारेमा आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेकी छन् ।
उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा यस्तो लेखेकी छन “माछी मार्न जाऔंन दाजै, कलापानीमा..” दुईदिन अगाडि हामीले ३३५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल सहितको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कलापानीक्षेत्र समाबिस्ट राष्ट्रिय नक्सा प्राप्त गर्‍यौं । छिमेकीको कुद्रुस्टीको शिकार भएको हाम्रो माटोलाई हाम्रो नक्शाभित्र समेट्न सक्ने शाहस गरेकोमा म सर्वप्रथम नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सारा संसार नै कोरोनाको संकटमा जुधिरहेको मौका छोपेर नेपाली भुमी हुंदै मानसरोवर पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरी नेपालको सर्वभौमिकता माथि धावा बोल्ने छिमेकी भनौदाको कुचेस्टालाई नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा मार्फत एउटा नराम्रो झापड हान्न सफल भएको छ । यो झापडलाई हामी सबै नेपालीहरुले ताली बजाएर अनुमोदन गरिसक्यौ, सवा तीन करोड नेपालीहरुले अनुमोदन गरेको यो झापडले छिमेकीको दाहिने गाला नराम्ररी चड्किसकेको छ भन्ने खबर छिमेकिकै मिडियाहरुले पोखिरहको आर्तनादबाट प्रस्ट हुन्छ ।
हामीले लिम्पियाधुराको चिसो माटोमा सुन्तला फलाउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? पार्वतीकुण्ड देखी गुन्जोसम्म कालोपत्रे सडकको निर्माण गरी हाम्रै सवारी साधन कुदाउन सक्छौकी सक्दैनौ ? कुटी, नाभी र छाङरुमा भेडाबाख्रा अनी चौरीहरु डुलाउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? दशकौ देखी हाम्रो भुमिमा परेड खेलीरहेका छिमेकी सुरक्षकर्मीको दस्तालाई विस्तापित गरेर आफ्नै सुरक्षाकर्मिको क्याम्प खडा गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ ? अनी नेपाली शान र मानको प्रतिक राष्ट्रिय झण्डालाई लिपुलेकको चुचुरोमा फरफराउन सक्छौकी सक्दैनौ ? यि प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । प्रश्नको उत्तर खोज्ने मात्र होइन “हामी सक्छौ” भन्ने साहशिलो उत्तर दिनको लागि प्रत्येक नेपाली तयार हुनु पर्ने अवस्था पनि आईसकेकोछ । प्रत्येक नेपालीले प्रस्तुत गर्ने शाहस, हिम्मत र आँटलेनै सरकारलाई आगामी कदम चाल्नको लागि नैतीक दवाबका साथै अझ थप बल मिल्ला ।
हामीले खपत गर्ने दैनिक उपभोग्य सामाग्री मध्ये ७० प्रतिशत सामाग्री भारतीय बजार बाटनै आयात हुने भएकोले भारतले हाम्रो आँट, शाहस् र हिम्मतलाई टुटाउन ‘नाकाबन्दी’को घोषणा नगर्ला भन्न सकिन्न । किनकी ०७२ सालको भुकम्पको कस्टकर घडीमा समेत हाम्रो छीमेकीले हामीलाई अघोषित नाकाबन्दिको अनुभव दिलाईसकेकोछ । भारतले हामीलाई देखाउन सक्ने डर, धाक वा धम्की भनेको एउटै हो : उपभोग्य सामाग्री निर्यातमा रोक । भारतको यो धम्कीलाई लत्याउन सक्ने हाम्रो प्रमुख शस्त्र/अस्त्र भनेको नै हाम्रो आत्मविश्वाश हो । अत: यदी भारतले हामीलाई नाकाबन्दीको फर्मुला प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने यस्का लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु मानसिक रुपमा तयार छौ त ? भोली ग्याँस, डिजेल र पेट्रोल नपाईन सक्छ, चामलको अभाव हुन सक्छ । अदुवा, प्याज र लसुन नभित्रिन सक्छ अनी चिनी नपाईन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आएको खण्डमा हामी के के गर्न तयार छौ ? के हामी ग्याँसको सट्टा गुईठो बाल्न तयार छौ ? पेट्रोलको अभावमा गाडी चल्न सक्दैन, पैदल हिंडेर यात्रा तय गर्न तयार छौ ? चामलको अभावमा भात खान नपाईएला, भोकभोकै मर्न तयार छौ ? अदुवा, लसुन र प्याजबिनाको खल्लो ‘खोले’ खाना तयार छौ कि छैनौ ? मधुमेहलाई बढावा दिने चिनियुक्त चिया छोड्न तयार छौ त ? यि यावत प्रश्नहरु हाम्रा लागि हुन्, यि प्रश्नको जवाफमा “म तयार छु” भन्ने हिम्मतिलो जवाफ जबसम्म आउँदैन तबसम्म कलापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराले देशको नक्सा भित्रबाट हामीलाई गिज्याइरहेको हुनेछ र भनिरहेको हुनेछ ” धिक्कार, तिमीहरुको राष्ट्रवाद !”
मैले यि शब्दहरु लेखिरहँदा यतिखेर भारतीय मिडियाहरुले नेपाल र नेपालीहरुको स्वाधिनता माथि ‘थर्ड क्लास’को टिप्पणीहरु गरिरहेका छन् । यि यस्ता टिप्पणीहरुले म भित्र आक्रोशको रक्तसंचार भईरहेको छ । तर, भगवान गौतम बुद्दको धर्तीमा जन्मिएकी म नेपाली चेलीले संवाद, शान्ती र सौहाद्र ब्यवहारमा विश्वाश गर्ने गरेकी छु । मलाई थाहाछ, बम र बारुदको बिस्फोटनले गरेको युद्द भन्दा मन र मस्तिस्कको सम्म्रिश्रणले लडेको युद्द सफल हुन्छ । अत : हामी सबैले स्वंयमित हुँदै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई जोगाउनु छ । हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई- च्यात्तिएको नेपाल होइन, सग्लो नेपाल दिनुछ । अँधुरो, अपुरो र अधकल्चो नेपाल होइन सिङ्गो नेपाल दिनुछ । लोलाएको, सेलाएको र झोक्राएको नेपाल होइन कलकलाएको, फुलेको र फलेको नेपाल दिनुछ । यसर्थ, आउनुस् : हामी समस्त नेपालीहरु एकढिक्का होऔ । काँग्रेश र कम्युनिस्टको सोच त्यागौं । जातिय संकिर्णतालाई भुलौ । धार्मिक पर्खाललाई भत्काइदिऔ । हाम्रो एकता नै हाम्रो लागि सबै भन्दा ठुलो आणविक ‘क्षप्यास्त्र’ हो । आउनुस्, हामी एकाकार होऔ, गोलबद्द होऔ अनी एकै स्वर र लयमा गाऔ
“माछी मार्न जाउँन दाजै, कलापानीमा,
छेकी बारी दुवाली महाकालीमा…” जय नेपाल
उही, नेपालकी छोरी/ चेली श्वेता खड्का”